अल्सर (Ulcer) भनेको पेटको पाचनप्रणाली संग जोडिएको एक रोग हो. अल्सर (Ulcer) एक प्रकारको घाउ हो जुन पेट, आहार नाली र आमाशयको भित्रि सतहमा हुन्छ.
अल्सर (Ulcer) भनेको एक प्रकार को घाउ हो जुन पेट, आहार नाली, आमाशय को भित्रि सतह मा विकसित हुने गर्दछ । अल्सर (Ulcer) लाई अलग अलग नाम मा चिनिन्छ जस्तै पेटमा हुने अल्सर (Ulcer) लाई पेटको अल्सरअल्सर (Ulcer) वा ग्यास्ट्रिक अल्सर (Ulcer) भनिन्छ । पेटमा अल्सर (Ulcer) हुने बिरामी को लागि खानै नहुने खानाहरु के के हुन् भन्ने विषय मा यो पोस्ट रहेको छ ।
अल्सर (Ulcer) भन्ने बितिक्कै पेट को पाचनप्रणाली संग जोडिएको एक रोग हो । यो पेट मा ग्यास बढ्ने, पानी कम पिउने, कम खाना खाने वा खानै खान मन नगर्ने, खाली पेट मा तेल बाट निर्मित खाना खाने, दुध लगाएको चिया बढी पिउने, भोको पेट मा चिल्लो पदार्थ खाने, वा पेटमा उब्जिएको ग्यास को ख्याल नगरी जथाभावी खाना खाने गर्दा पेट मा आन्द्रा को मुख मा घाउ बन्न पुग्दछ त्यसैलाई नै अल्सर भन्ने गरिन्छ । पानी कम पिउने र खानपान मा पटक्कै ध्यान नदिने गर्दा प्राय अल्सर चाडै हुने गरेको पाइन्छ ।
अल्सरको बिरामीले खान नहुने खानाहरु(Food to avoid for Ulcer) :
यदि ब्रत बस्ने बानी छ भने अल्सर (Ulcer) को बिरामी ले ब्रत बस्न छोड्ने ब्रत ले अल्सर (Ulcer) अझ बढाउने गर्दछ ।
ब्रत पटक्कै नबस्ने ब्रत बस्नु नै अल्सर (Ulcer) हुनुको एक कारण पनि हो ।
अल्सरको बिरामीले खानु पर्ने खानाहरु (Good Food for Ulcer) :
दैनिक शारीरिक ब्यायाम गर्ने